bedava deneme bonususlot siteleribitcoin bahisvurkacbahis.comsupertotovip.comtipobetm.combetturkeygiris.orgvenusbetgiris.netKralbet Girişkralbetz.com The Lost City – Gold Channel Movies
The adventure is real. The heroes are not.Mar. 24, 2022USA112 Min.PG-13
Gold Channel ပရိသတ်ကြီးအတွက်Adventure, action, comedy အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ The Lost Cityနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်၊ဒီကားထဲမှာတော့ Sandra Bullock, Channing Tatum နဲ့Brad Pittတို့လိုနာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းတွေ့ရမှာပါ။
စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ‌လော်ရတ်တာ(Sandra Bullock)က စွန့်စားခန်း ၀တ္ထုရှည်တွေရေးနေတဲ့နာမည်ကြီးစာရေးဆရာမတစ်ဦးပါ၊သူ့စာအုပ်ရဲ့ပင်တိုင်မျက်နှာဖုံးမော်ဒယ်အဖြစ်ကိုတော့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့အသည်းကျော် မော်ဒယ်အလန်(Channing Tatum)က တာ၀န်ယူပေးထားပါတယ်၊တစ်နေ့မှာ လော်ရတ်တာရဲ့ထုတ်ဝေသူ ဘာ့သ်က လော်ရတ်တာရဲ့စာအုပ်အတွက် စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲတစ်ခုကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်၊ ပရိသတ်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင်အဲဒီပွဲကိုအလန်နဲ့လော်ရတ်တာတို့နှစ်ယောက် အတူတူတက်ရမယ်ပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ မမျော်လင့်ဘဲ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲမှာ ပြသနာဖြစ်သွားပြီးတော့ လော်ရတ်တာတစ်ယောက် ပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရပါတယ်…
ဘာအတွက်ကြောင့်လဲဆိုတာတော့ အခုပဲThe Lost Cityမှာကြည့်ရှူအဖြေရှာလိုက်ရအောင်ပါ။
Translated by MaryChrist,C’mon,Monn,Keith,LuYui&Egg
IMDb Rating 6.6 20,878 votes
TMDb Rating 6.9 282 votes
Download Mega SD 480p Myanmar 409 MB
Download G Drive SD 480p Myanmar 409 MB
Download Megaup HD 720p Myanmar 976 MB
Download Mega HD 720p Myanmar 976 MB
Download G Drive HD 720p Myanmar 976 MB
Download Megaup FHD 1080p Myanmar 1.5 GB
Download Mega FHD 1080p Myanmar 1.5 GB
Download G Drive FHD 1080p Myanmar 1.5 GB